Fiantohana fitsangatsanganana ~ Journey-Assist - Karazan'antoka fiantohana
Pejy fandraisana » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Fiantohana fitsangatsanganana
Ny singa tena amin'ny politikam-piantohana
Aza manonerana onitra raha:
Karazana fiantohana refunds
Io no habe farany ambony azo aloa amin'ny endrika fanonerana raha toa ka misy hetsika ahitàna. Matetika dia voafetra 30-50 XNUMX euros na dolara io fetrany io. Mazava ho azy fa ny habetsaky ny vola dia ampiasaina afa-tsy amin'ny tranga henjana (fandidiana sarotra, na fitaterana mankany an-tanindrazana noho ny antony fitsaboana).
Raha tsy afaka manome fanampiana ilaina ny dokotera eo an-toerana, ny politika toy izany dia manarona ny fandroahana mpizahatany any amin'ny toeram-pitsaboana iray any amin'ny taniny. Ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony, ny fiantohana fototra dia mandrakotra ny vidin'ny serivisy serasera raha toa ka misy hetsika fiantohana.
Ny mpankafy ny hetsika ivelan'ny any ivelany sy ny fomba tafahoatra mba handaniany ny politika manokana, ny vidiny izay, toy ny fitsipika, dia avo roa heny noho ny fototra. Mazava ho azy fa be dia be ny fandrakofana ny fiantohana toy izany, toy ny antoka sy ny fandoavam-bola be. Tokony ho fantatrao koa fa ny fiantohana fototra dia tsy mihatra amin'ny tranga izay mitranga amin'ny trano fisakafoanana amin'ny ski na mandritra ny fomba fanatanjahantena mahery vaika na henjana. Ny orinasa fiantohana tsirairay dia manana ny lisitry ny fotoam-pivavahana tamin'ny andro taloha.
maharitra Ny fiantohana dia afaka manana safidy marobe, izay andiana fiantohana isaky ny orinasa fiantohana. Ohatra, mety misy safidy mahaliana maro. Toy ny:
sy ny maro hafa…. .
Ary koa, amin'ny fiantohana maharitra, mazava ho azy, dia afaka mampiditra karazana pastime henjana.
Raha tsy manana fiantohana maharitra miaraka amin'ny safidy manokana ianao, dia TSY miantehitra amin'ny onitra amin'ny tranga miseho amin'ny fanjakana zava-mahadomelina na toaka. Fiantohana koa TSY fandrakofana naratra nandritra ny toe-javatra mahery vaika:
fanonerana izany. Rehefa tonga ny fisehoan-javatra voarohirohy, ny mpandeha dia mandoa ny vola rehetra, ary avy eo, miverina an-tanindrazana, ary manamafy ny fandaniany amin'ny orinasam-piantohana. Izay no manonitra ny vidiny voamarina. (mitazona ny fahazoan-dàlana rehetra, taratasy fanamarinana, antontan-taratasy mifandraika amin'ny fisian'ilay hetsika ahitàna.
Aoka ho tsara anao ny zava-drehetra, ary ny fampahalalana voaray momba ny raharaha fiantohana dia tsy tokony hampiasaina amin'ny fampiharana